जीवन-संघर्ष - Samata Khabar
मीना स्वर्णकारको अनुभव : महिलालाई राजनीतिमा आउन अझैं कठिन
काठमाडौं । समाज २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि सोच पुरातनवादी नै थियो । जहाँ सामन्तवादी पितृसत्ता र जातजातीका आधारमा भेदभाव कायमै थियो । ठूला भनिएकाहरुले सानालाई हेप्थे र दबाबमै राख्थ्ये– धनी गरिब र माथिल्लो जात तल्लो जातकै आधारमा । यहि समाजमा जन्म भयो मीना स्वर्णकारको । दाङ जिल्लाको घोराही नगरपालिकामा विं सं २०३१ साल […]
काठमाडौं २९ साउन । सीता वाइवा (४०) को सपना नर्स बन्ने थियो । सेतो लुगा लगाएर सेतै फूलले कपाल सजाएर बिरामीको सेवामा जुट्ने नर्स देख्दा उनमा पनि त्यस्तै सपना आएको थियो । तर, अहिले थापाथली चोकमा दिनभरि तगारीमा मकै पोल्छिन् । प्रसूति गृहका नर्स उनका ग्राहक हुन् । भन्छिन्, ‘सपनै त देखेको हो । स्कुलको मुखै नदेखेकी गरिब टुहुरीको सपना […]
डा. विष्णुमाया परियारले भोगेको विभेदको व्यवाहारिक पाटो
काठमाडौं, १९ वैशाख : ‘यदि म दमाईको छोरी भएर नजन्मिएको भए अहिले यो ठाउँमा हुने थिइँन’, विश्वभर चर्चामा रहेकी स्थापित नेपाली चेली डा. विष्णुमाया परियारले भनिन् । अमेरिकाको न्युजर्सीका मेयरको सल्लाहकार रहेकी परियार जे छिन् हिजो भोगेको विभेदको परिणाममा छिन् । तर हरेक महिला विष्णुमाया बन्ने अवस्था छैन, अहिले । त्यसैले सामाजिक संस्था मार्फत दलित […]
मधेसी दलितमा स्नातक अध्ययन गर्ने एक्ली बुहारी
जनकपुरधाम ९ बैशाख : जनकपुरधामकी अम्बिका मण्डल (खत्वे) अचेल एकदमै हर्षित छिन्, तर गत ५ वर्षदेखि रेडियोमा प्राविधिकको रुपमा काम गर्दै आएकी अम्बिकालाई सञ्चारक्षेत्रसँग जोडिनुपूर्व कहिल्यै लागेको थिएन कि उनले पनि जीवनमा खुसी अनुभूति गर्ने छिन् भनेर । जनकपुरधाम वडा नम्बर १६ घर भएकी अम्बिकाको विवाह १३ वर्षको कलिलो उमेरमै भयो । दलित परिवारमा जन्मिएकाले […]
काठमाडौं, ९ बैशाख : बालवय घरेलु मजदूरका रूपमा बिताएकी उर्मिला चौधरीलाई कम्लरी मुक्ति अभियानप्रतिको अविचलित प्रतिबद्धताले प्रेरणाको पात्र बनाएको छ। कम्लरी मुक्ति अभियन्ता दाङकी उर्मिला चौधरीको चर्चा त्यतिबेला चुलियो जब पूर्व कम्लरी उनले रुजभेल्ट फाउण्डेसन, नेदरल्याण्ड्सबाट अन्तर्राष्ट्रिय लरियट फ्रिडम फ्रम फियर अवार्ड– २०१८ प्राप्त गरिन् । २०६४ सालदेखि कम्लरी मुक्तिको लडाइँमा होमिएकी उर्मिलाको कार्यक्षेत्र भने […]